၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး Rapper (၅) ယောက်က ဘယ်သူတွေလဲ
17 Sep 2018 . 2:37 PM
လတ်တလောမှာ Rap God ကြီး Eminem နဲ့ Rap Devil လို့ ဆိုလာသူ MGK တို့ အပြန်အလှန် Diss ပြီး Beef ဖြစ်နေတာကြောင့် လူတွေက Rap ဂီတဖက်ကို အာရုံစိုက်လာကြပါတယ်။ Eminem က MGK ကို ပြန် Diss ခဲ့တဲ့ ‘Killshot’ သီချင်းရဲ့ စာသားမှာ ” Luxury, oh, you broke, bitch? Yeah, I had enough money in ’02 To burn it in front of you,ho’ ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ “မင်းရှေ့မှာ မီးရှို့ပစ်ဖို့ထိ ငါ့မှာ ပိုက်ဆံအလုံအလောက်ရှိခဲ့တယ်” ဆိုပြီး ကြွယ်ခဲ့ပါတယ်။
Eminem ဟာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ သူ့အသက် ၃၀ အရွယ်တုန်းက သူ့ရဲ့ အသားတင်ကြွယ်ဝမှုဟာ ဒေါ်လာ ၃၈ သန်းကျော်လောက် ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းရပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ MGK ရဲ့ အသားတင်ကြွယ်ဝမှုကတော့ ဒေါ်လာ ၈ သန်းပဲ ရှိတာကြောင့် ၂၀၀၂ တုန်းကတောင် ငါက မင်းထက်ချမ်းသာသေးတယ်လို့ ဖမ်းကြွယ်တာပါ။
အခုရော Em ဟာ အဲဒီလောက် ကြွယ်ဝပါသေးရဲ့လား။ အချမ်းသာဆုံး Rapper တွေထဲမှာ သူပါဝင်ပါသလား။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ အကြွယ်ဝအချမ်းသာဆုံး Rapper (၅) ယောက်နဲ့ သူတို့ရဲ့ ကြွယ်ဝမှုတန်ဖိုးတွေကို တစ်ချက်လောက် ကြည့်လိုက်ရအောင်။
အရင်နှစ်တွေတုန်းက အချမ်းသာဆုံး Rapper ဆိုတဲ့ နေရာမှာ P. Diddy က ရပ်တည်နေခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ Jay-Z ရဲ့ငွေကြေးအရ အောင်မြင်မှုတွေက ဖြတ်ကျော်တက်ခဲ့ပါပြီ။
၄။ Eminem – ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀
Jay-Z လောက် ပိုက်ဆံရှာတာ မကြမ်းပေမယ့် Eminem ကတော့ Rap Game ထဲမှာ ငွေရှာကောင်းနေဆဲပါ။ သမိုင်းတစ်လျှောက်ရောင်းအကောင်းဆုံး Rapper တွေထဲက တစ်ေယာက်ဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ Album ‘Revival’ က သူ့ကို Forbes ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းမှာ ပါဝင်လာစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ Drake – ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀
Drake ကလည်း Eminem နဲ့ တန်းတူကြွယ်ဝတာကြောင့် နံပါတ် ၄ နေရာမှာပဲ ဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။ အသက် ၃၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Drake ဟာ အချမ်းသာဆုံး Rapper တွေထဲမှာတော့ အသက်အငယ်ဆုံးပါပဲ။ သူဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တည်းက အခွန်တွေနဲ့ သုံးစွဲမှုတွေမဖြတ်ခင်မှာ ဒေါ်လာ သန်း ၂၅၀ ဝင်ငွေရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ အခွေတွေနဲ့ Tour တွေ ဆက်တိုက်ဖျော်ဖြေမှုတွေက သူ့ကို ကမ္ဘာကျော် ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ Rapper တစ်ယောက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
၃။ Dr.Dre – ဒေါ်လာ သန်း ၇၇၀
ဒီ Music Producer ကြီးရဲ့ စွမ်းအားကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။ နံပါတ် (၄) နေရာနဲ့ နံပါတ် (၃) နေရာက ကြွယ်ဝမှုက အတော့်ကို ကွာတာနော်။ သူ့ရဲ့ ဒီလို ဝင်ငွေမြင့်တက်လာမှုဟာ Beats by Dre ကို Apple က ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံနဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ဝယ်ယူခဲ့မှုကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။
၂။ Diddy – ဒေါ်လာ ၈၂၅ သန်း
Sean John Combs လို့လည်း ခေါ်၊ P. Diddy လို့လည်း လူသိများတဲ့ Diddy ဟာ နံပါတ် (၁) နေရာကနေ နံပါတ် (၂) နေရာကို ဆင်ေးပးခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ Hip Hop အင်ပါယာမှာ သူ့ရဲ့ ငွေကြေးတွေကို Sean John Brand ၊ Vodka ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ TV Network Sectors တွေကနေ ရရှိခဲ့ပြီး အခုလို ရပ်တည်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Jay-Z – ဒေါ်လာ သန်း ၉၀၀
Hip Hop ဘုရင်ကြီး ၃ ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dr. Dre ၊ Diddy နဲ့ Jay-Z တို့ဟာ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် သူတို့ရဲ့ ကြွယ်ဝမှုတွေ တိုးတက်လာအောင် လုပ်နေပေမယ့် Jay-Z ကတော့ ဒေါ်လာ သန်း ၈၁၀ ကနေ သန်း ၉၀၀ လောက်ထိ တဟုန်ထိုးတိုးပွားလာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Armand de Brignac ရှိန်ပိန်နဲ့ D’Usse Cognac တွေရဲ့ ရှယ်ယာမြင့်တက်မှုက ဒီလို ဖြစ်စေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး နံပါတ် (၁) နေရာကို ရောက်ရှိစေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှဈရဲ့ အခမျြးသာဆုံး Rapper (၅) ယောကျက ဘယျသူတှလေဲ
လတျတလောမှာ Rap God ကွီး Eminem နဲ့ Rap Devil လို့ ဆိုလာသူ MGK တို့ အပွနျအလှနျ Diss ပွီး Beef ဖွဈနတောကွောငျ့ လူတှကေ Rap ဂီတဖကျကို အာရုံစိုကျလာကွပါတယျ။ Eminem က MGK ကို ပွနျ Diss ခဲ့တဲ့ ‘Killshot’ သီခငျြးရဲ့ စာသားမှာ ” Luxury, oh, you broke, bitch? Yeah, I had enough money in ’02 To burn it in front of you,ho’ ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ “မငျးရှမှေ့ာ မီးရှို့ပဈဖို့ထိ ငါ့မှာ ပိုကျဆံအလုံအလောကျရှိခဲ့တယျ” ဆိုပွီး ကွှယျခဲ့ပါတယျ။
Eminem ဟာ ၂၀၀၂ ခုနှဈ၊ သူ့အသကျ ၃၀ အရှယျတုနျးက သူ့ရဲ့ အသားတငျကွှယျဝမှုဟာ ဒျေါလာ ၃၈ သနျးကြျောလောကျ ရှိတယျလို့ ခနျ့မှနျးရပွီး လကျရှိအခြိနျမှာ အသကျ ၂၈ နှဈရှိပွီ ဖွဈတဲ့ MGK ရဲ့ အသားတငျကွှယျဝမှုကတော့ ဒျေါလာ ၈ သနျးပဲ ရှိတာကွောငျ့ ၂၀၀၂ တုနျးကတောငျ ငါက မငျးထကျခမျြးသာသေးတယျလို့ ဖမျးကွှယျတာပါ။
အခုရော Em ဟာ အဲဒီလောကျ ကွှယျဝပါသေးရဲ့လား။ အခမျြးသာဆုံး Rapper တှထေဲမှာ သူပါဝငျပါသလား။ ၂၀၁၈ ခုနှဈရဲ့ အကွှယျဝအခမျြးသာဆုံး Rapper (၅) ယောကျနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကွှယျဝမှုတနျဖိုးတှကေို တဈခကျြလောကျ ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
အရငျနှဈတှတေုနျးက အခမျြးသာဆုံး Rapper ဆိုတဲ့ နရောမှာ P. Diddy က ရပျတညျနခေဲ့ပမေယျ့ အခုတော့ Jay-Z ရဲ့ငှကွေေးအရ အောငျမွငျမှုတှကေ ဖွတျကြျောတကျခဲ့ပါပွီ။
၄။ Eminem – ဒျေါလာ သနျး ၁၀၀
Jay-Z လောကျ ပိုကျဆံရှာတာ မကွမျးပမေယျ့ Eminem ကတော့ Rap Game ထဲမှာ ငှရှောကောငျးနဆေဲပါ။ သမိုငျးတဈလြှောကျရောငျးအကောငျးဆုံး Rapper တှထေဲက တဈေယာကျဖွဈသလို သူ့ရဲ့ Album ‘Revival’ က သူ့ကို Forbes ရဲ့ အခမျြးသာဆုံး စာရငျးမှာ ပါဝငျလာစခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
၄။ Drake – ဒျေါလာ သနျး ၁၀၀
Drake ကလညျး Eminem နဲ့ တနျးတူကွှယျဝတာကွောငျ့ နံပါတျ ၄ နရောမှာပဲ ဖျောပွခံခဲ့ရပါတယျ။ အသကျ ၃၁ နှဈရှိပွီဖွဈတဲ့ Drake ဟာ အခမျြးသာဆုံး Rapper တှထေဲမှာတော့ အသကျအငယျဆုံးပါပဲ။ သူဟာ ၂၀၁၀ ခုနှဈတညျးက အခှနျတှနေဲ့ သုံးစှဲမှုတှမေဖွတျခငျမှာ ဒျေါလာ သနျး ၂၅၀ ဝငျငှရှေိခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈနှဈက ထှကျရှိခဲ့တဲ့ အခှတှေနေဲ့ Tour တှေ ဆကျတိုကျဖြျောဖွမှေုတှကေ သူ့ကို ကမ်ဘာကြျော ဝငျငှကေောငျးတဲ့ Rapper တဈယောကျဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။
၃။ Dr.Dre – ဒျေါလာ သနျး ၇၇၀
ဒီ Music Producer ကွီးရဲ့ စှမျးအားကတော့ အံ့မခနျးပါပဲ။ နံပါတျ (၄) နရောနဲ့ နံပါတျ (၃) နရောက ကွှယျဝမှုက အတေျာ့ကို ကှာတာနျော။ သူ့ရဲ့ ဒီလို ဝငျငှမွေငျ့တကျလာမှုဟာ Beats by Dre ကို Apple က ဒျေါလာ ၃ ဘီလီယံနဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှဈက ဝယျယူခဲ့မှုကွောငျ့လညျး ပါပါတယျ။
၂။ Diddy – ဒျေါလာ ၈၂၅ သနျး
Sean John Combs လို့လညျး ချေါ၊ P. Diddy လို့လညျး လူသိမြားတဲ့ Diddy ဟာ နံပါတျ (၁) နရောကနေ နံပါတျ (၂) နရောကို ဆငျေးပးခဲ့ရသူဖွဈပါတယျ။ Hip Hop အငျပါယာမှာ သူ့ရဲ့ ငှကွေေးတှကေို Sean John Brand ၊ Vodka ထုတျလုပျမှုနဲ့ TV Network Sectors တှကေနေ ရရှိခဲ့ပွီး အခုလို ရပျတညျနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
၁။ Jay-Z – ဒျေါလာ သနျး ၉၀၀
Hip Hop ဘုရငျကွီး ၃ ယောကျဖွဈတဲ့ Dr. Dre ၊ Diddy နဲ့ Jay-Z တို့ဟာ တဈနှဈထကျ တဈနှဈ သူတို့ရဲ့ ကွှယျဝမှုတှေ တိုးတကျလာအောငျ လုပျနပေမေယျ့ Jay-Z ကတော့ ဒျေါလာ သနျး ၈၁၀ ကနေ သနျး ၉၀၀ လောကျထိ တဟုနျထိုးတိုးပှားလာအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျသူ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ Armand de Brignac ရှိနျပိနျနဲ့ D’Usse Cognac တှရေဲ့ ရှယျယာမွငျ့တကျမှုက ဒီလို ဖွဈစခေဲ့တာ ဖွဈပွီး နံပါတျ (၁) နရောကို ရောကျရှိစခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။